October 23, 2009 at 4:28 pm4comments	အော် ဒုတ်ခ…ဘလော့ရေးတာစွဲတယ်လို့ မမခင်ဦးမေပြောတာဟုတ်မယ်။ တရက်သားဘလော့ကလေးကို ပို့စ်သုံးခုလောက်တင်ထားမှလာလည်ကြတဲ့သူတွေလဲ ကလစ်နှိပ်ရတာတန်မယ်လေ။ ဒီတော့ကာ နောက်တပို့စ်တင်လိုက်ဦးမယ်။ ပြီးရင်တော့ အိပ်ပီ။
Entry filed under: စကားစမြည်, ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်း. Tags: .	လတ်တလောဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တွေ	ခရုအိမ်…	4 Comments Add your own
SDL | October 24, 2009 at 5:31 pm
mashwemi | October 23, 2009 at 11:30 pm
TTSweet, MrLuPyoGyi လာလည်ပီးကွန်မင့်လေးတွေချန်ခဲ့တာကျေးဇူးပါပဲရှင်🙂
မမဆွိရေ ဟုတ်တယ် မရွှေမိဝါသနာပါတာ စာအုပ်နဲ့အစားအသောက်က အဓိကပဲ။ စာအုပ်တွေအကြောင်းပဲပြောချင်လွန်းလို့ကိုဘလော့လုပ်လိုက်တာ😀
TTSweet | October 23, 2009 at 10:30 pm
လူပျိုကြီး | October 23, 2009 at 6:32 pm